Axmed Madoobe”Doorasho kuma dhici karto qaabka ay hadda wax u socdaan.” – AfmoNews
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo waxana uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka dalka.
Axmed Maxamed Islaam Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in aanay doorasho ku dhici karin sida maanta tahay, isagoo caddeeyay in aanay doorasho dhaceyn illaa Maamulka Gedo gacantooda ku soo noqoto, isla markaana Guddoomiyaha Gobolka Gedo iyo Kuxigeenkiisa ay ka tagaan Gobolka.
“Dadka maanta Mas’uuliyadda dowladda Federaalka ay saaran tahay ee Madaxweynaha iyo cida kale waa inay kala saaraan habraaca doorashada sida ay u dhaceyso doorashada iyo Ololahooda siyaasadda”ayuu yiri Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ku tilmaamay qaabka ay wax u socdaan ee diyaargarowga doorashada inuu yahay mid afduub ah.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa soo dhoweeyay kulanka ay dhowaan ku yeesheen magaalada Muqdisho qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada dalka.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Hay’adaha Amniga kulan la yeeshay